ဆာမူရိုင်းတွေ ငရဲကျသလား? - JAPO Japanese News
ေန႔စဥ္စကားလုံး ၁ လုံး
ၾကာ 08 Oct 2020, 9:45 မနက္
SAMURAI ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ ထူးခြားသည့်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆာမူရိုင်းတွေဆိုတာ လူသတ်သမားတွေပဲလို့… သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်နော်။
မဟုတ်ပါဘူး… အားနည်းတဲ့လူကိုကူညီတတ်တဲ့ကြင်နာမှုအပြင် ဂုဏ်သက္ခာ၊ သစ္စာရှိမှုကိုပါတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းတွေကို ပြင်းထန်စွာချမှတ်ကြတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုဆိုရတာနဲ့အတူ လူသတ်ရတာလည်း သူတို့ရဲ့အလုပ်ပါပဲ…
အဲ့ဒီလိုသူတို့တွေက သေပြီးတဲ့နောက်မှာ ငရဲကျသွားလာ?
သေဆုံးပြီးနောက် ကမ္ဘာတစ်ခုရှိနေသေးလား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် ကျွန်တော်လည်းမသေဖူးသေးတော့ အဖြေမပေးနိုင်ပေမဲ့၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတာကြောင့် နောက်ဘဝဆိုတာရှိမယ်ဆိုရင်တောင်မှ မထူးဆန်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာကတော့ သေဆုံးပြီးနောက်အယူအဆက ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ကွဲလွဲမှု ၂ ခုရှိတယ်။ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လူ ရောက်ရှိမယ့်နေရာကတော့ Paradise Jodo နိဗ္ဗာန်ပေါ့…
နောက်ပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ 六道（りくどう）လို့ခေါ်တဲ့ ဘုံ ၆ဘုံထဲက ၁ဘုံ ကိုသွားရတယ်။
ဒီဘုံ ၆ဘုံထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပိုကောင်းပြီး၊ အောက်ဘက်ကတော့မကောင်းတဲ့နေရာပေါ့။
စကားမစပ် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့လူသားတွေကမ္ဘာက ထိပ်ဆုံးကနေရေတွက်ရင် ၂ ခုမြှောက်မှာပါ။ ကောင်းမှု၊မကောင်းမှုတွေရောနှောနေတဲ့ လူ့ပြည်ပေါ့။
အလိုဆန္ဒနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးက Rokudo ပဲဖြစ်ပါတယ်.
လူသားတွေရဲ့ကမ္ဘာမှာလည်း အမျိုးမျိုးသောဆန္ဒတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်နော်…အဲ့ဒါနဲ့အောက်ဘက်မှာတော့ ငရဲလို့ခေါ်ကြတဲ့ကမ္ဘာရှိပါတယ်။ ငရဲပြည်ပေါ့။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ အပါယ်၄ဘုံထဲက ငရဲဘုံပေါ့။
ထိုအရာနဲ့ပြောင်းပြန် လူ့ပြည်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့ ပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ နတ်ပြည်ပါ…
ဒီနေရာကို နိဗ္ဗာန်လို့ထင်ကြတဲ့လူအများအပြားရှိပေမဲ့ တကယ်တော့မတူပါဘူးနော်..
ဟုတ်ပြီ.. နည်းနည်းမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ နိဗ္ဗာန် ကိုတော့ မရောက်နိုင်‌သေးလောက်ပါဘူးထင်ပါတယ်..
အစွန်းရောက်သီအိုရီကနေပြောရမယ်ဆို ဆာမူရိုင်းအလုပ်အကိုင်ဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနှိမ့်ဆုံးဘုံရဲ့ အပါယ်ဘုံထဲက ငရဲကိုပြည်ကို ပြုတ်ကျမှာပဲ။
အဲ့ဒီငရဲပြည်မှာလည်း ငရဲကြီး ၈ ထပ်ဆိုပြီးရှိသေးတော့
သူတို့တွေက ငရဲကြီး ၈ထပ်ထဲက တစ်ထပ်ထပ်ကို ကျမှာမဟုတ်လား..
ငရဲကျ၊ မကျဆိုတာအတွက် ဆုံးဖြတ်မှုက သေပြီးနောက်ပြုလုပ်တဲ့တရားစီရင်မှုမှာ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။အကယ်၍ သင်က လူသားများသာမက တိရိစ္ဆာန်များ၊ ပုရွက်ဆိတ်များနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကဲ့သို့သောသက်ရှိသတ္တဝါများကိုပါ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့အပေါ် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါက ငရဲသို့ချက်ချင်းသွားရမှာပါ။
အလုပ်မှာလူတွေကိုသတ်ဖြတ်တဲ့ဆာမူရိုင်းဟာ သူနောင်တရပေမဲ့ လူတွေကိုသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွားတာကြောင့် ဒီနေရာကနေထွက်လို့မရဘူး။
ယေဘူယျအားဖြင့်ငရဲတွင်သံခြေသည်း၊ ဓားများကဲ့သို့သောလက်နက်များဖြင့် တစ်ဦး ကိုတစ်ဦးသတ်ဖြတ်နေကြမှာပါ။ မြန်မာပြည်က ဘုရားစောင်းတန်းတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာလည်း ငရဲပြည်မှာ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာတွေကို လေ့လာမှတ်သားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အကယ်၍သင်သည်အသတ်ခံရပါက မကောင်းတဲ့အစွဲဖြင့် ပြန်ပြီး ရှင်သန်ထမြောက်မည်ဖြစ်ကာ ထိုငရဲ့ပြည်တွင်း၌ပင် အစဉ်အမြဲတိုက်ခိုက်နေရမှာပါ။
ဒီလိုတူညီသောဇာတ်လမ်းမျိုး ဒဏ္ဍာရီရှိပါတယ်။ရဲရင့်စွာတိုက်ပွဲဝင်ကြသော စစ်သူရဲကောင်းများ လူ့လောကမှထွက်သွားကြသောအခါ ၎င်းတို့သည် Main God Odin အောက်တွင်စုရုံးရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
ထို့နောက်သူတို့ဟာ နံနက်ခင်းလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး ညနေခင်း၌ပြန်လည်ရှင်သန်လာကာ စားသောက်ပွဲကျင်းပကြပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့နှင့်နောက်တစ်နေ့တို့မှာလည်း ဒီလိုပဲ အဆုံးမဲ့ဆက်လက်တည်မြဲနေပုံရပါတယ်။
ဘာသာရေးအရတော့ လုံးဝကွဲပြားခြားနားနေမှာပါ။ ဒါဟာဧရိယာအတော်လေးဝေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် အကြောင်းအရာရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေမှာ တူညီသောအရာတစ်ခုရှိနေတာက ထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ပဲ ဒီလိုတွေ ရှိရင်ရှိမှာပဲနော်။
အားလုံးလည်း ငရဲမကျဖို့ အထူးသတိပြုကြပါနော်။
ဂ်ပန္ဓါးကိုေရွာင္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါသလား ? !!!!
လုံ႔လႀကီးတဲ့ ဆာမူ႐ိုင္း (or) ဆာမူ႐ိုင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပင္ပန္းတဲ့နံနက္ခင္း !!!
SAMURAI နဲ႔ BUSHI အတူတူပဲလား?
တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္းရွိ စီးပြားတက္ေစတဲ့ နတ္ကြန္း ၅ ခု !!!!
စစ္မွန္တဲ့အခ်စ္ကိုလည္း သင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆာမူ႐ိုင္းရဲ႕ လမ္းစဥ္ !!!!!!
လူသားမ်ိဳးႏြယ္သစ္လား? ရွဴရႈိက္မႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ အသက္ဆက္ျခင္း။
စာဖတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္လုပ္ၾကပါစို႔ !!!!
Mitsubishi Motors ၏ဥကၠဌေဟာင္း Osamu Masuko ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ !!!!!
အာကာသကိုျမင္ခဲ့တဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ား၊ အခ်ိန္ ၈ ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ကင္မရာလက္ထဲသို႔ျပန္‌ေရာက္
ကမာၻေပၚက ဟီ႐ိုးေတြကို ဆာမူ႐ိုင္းအသြင္ေျပာင္းလိုက္ရင္ ！
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆုံး႐ုပ္ပြားေတာ္ Ushiku Daibutsu အား ေရသက္ပါယ္ရန္စိန္ေခၚမႈ
တိုက်ိဳရဲ႕ အႀကီးဆုံးစြမ္းအားတန္ခိုးျဖစ္တဲ့ Meiji Jingu ဘုရားေက်ာင္းသို႔ အလည္တစ္ေခါက္
အခ်င္းခ်င္းကူညီတတ္ေသာ ၾကင္နာတတ္တဲ့ႏွလုံးသား၊ Help card ကိုသုံးပါ
ကေလးကိုဆက္ၿပီးေကြၽးေမြးေနရွာတဲ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္တေစၦတစ္ဦးရဲ႕ မိခင္ေမတၱာ !!
MM.JAPO.WORLD ကို DNA ASIA LTD. မွစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ DNA ASIA LTD.
MM.JAPO.WORLD အတြင္းရွိ ေဆာင္းပါးမ်ား၏မူပိုင္ခြင့္ကို DNA ASIA LTD. မွပိုင္ဆိုင္သည္။ ဓါတ္ပုံစသည္ အျခားေသာ website မွကိုးကားထားသည့္အရာႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ကိုးကားထားသည့္ေနရာ URL ရဲ႕ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္သည္။
Bản tiếng Việt - ភាសាខ្មែរ - ျမန္မာဘာသာ